Kulan ay maanta wasiirada arrimaha dibedda ee wadamada urur goboleedka IGAD ku jiraa beelaha Soomaalida la yeesheen, isla markaana ka dhacay Mbagathi ayeey wasiiradu qabiilooyinka Soomaalida ugu soo jeediyeen inay beel waliba soo gudbiso saddex qof oo xubno ka noqon doona gudiga khilaafaadka wejiga saddexaad ee shirka iyo weliba inay qolo waliba soo qaybsato tirada loo qoondeeyey ee ay baarlamaanka ku meel gaadhka ah ku yeelan doonaan.
Waxayna wasiiru dibadeedyada IGAD maanta Soomaalida horteeda ka caddeeyyeen inuu wejigii 1aad iyo wejigii 2aad ee shirka laga soo gudbey oo wixii hadda ka dambeeya wejigii 3aad ee shika loo gudbey.
Waxay kaloo wasiirada oo ilaa maanta hadba, beel la kulmayey ku nuux-nuuxsadeen sida ay uga midaysan yihiin guul ka gaadhida shirka iyo inay Soomaaliya yeelato dawlad dhexe oo loo dhan yahay. Iyadoo wasiirada arrimaha dibedda ee wadamada Jabuuti iyo Itoobiya ay si gaar ah carrabka ugu adkeeyeen inuu dhamaaday khilaafkii dib u heshiisiinta Soomaaliya ku sabsanaa ee labadaas dawladood u dhexeeyey. Dhinaca Soomaalida tolalkii ay wasiiradu la kulmeen waxay dhamaantood si buuxda u ayideen soo jeedintii wasiirada. Iyadoo ay qolo kasta siyaasiyiintoodu ku dhawaaqayen hadallo ay ku taageereen soo jeedinta wasiirada. Mana jiin wax buuq iyo is qab-qabsi ah oo hoolkii uu shirku maanta ka socdey ka dhacay. Waxaana hadda muuqata naruuro aad u bilaysa ka midha dhalinta shirka, taas oo ka shidaal qaadanaysa khilaaf la’aanta waddamada IGAD beryahan ka soo cawaal baxaysa.
Soo xidhidda wejiyadii hore ee shirka iyo dar-dar gelinta wejiga 3aad ee shirka ayaa ku soo beegantay xilli uu shirku ku sugan yahay xaalad dhaqaalo xumo iyo wakhti uu xabsi wadanka Kenya ku yaalla ku jiro Mudane Xuseen Caydiid oo ah hogaamiye kooxeed ka mid ah kuwa ugu caansan siyaasiyiinta Soomaalida oo uu xaakim Kenyaan ah amray in gudaha la dhigo, kaddib markii lagu eedeeyey inuu ka war-wareegay dhawr jeer oo maxkamad dacwo ka dhan ah faraha ku haysey looga yeedhay.